Shabdako Ghar » आमाले फोनमा भन्नुभयो, ‘जोगिएस है बाबु’ आमाले फोनमा भन्नुभयो, ‘जोगिएस है बाबु’ – Shabdako Ghar
आमाले फोनमा भन्नुभयो, ‘जोगिएस है बाबु’
डा. शेरबहादुर कमर
सेती प्रादेशिक अस्पताल, कैलाली
मेरो जन्मघर गोरखा हो । मेरो परिवार काठमाडौंमा छ । परिवारमा श्रीमती, छोराछोरी र आमा हुनुहुन्छ । कोरोना पोजेटिभका बिरामीलाई अस्पतालको आइसोलेसन वार्डमा राखेर उपचार गर्न थालेपछि घरबाट फोन आउने क्रम बढेको छ ।
उहाँहरूलाई डर लाग्नु पनि स्वभाविक हो । आमाले पनि दिनहुँ फोन गर्नु हुन्छ । ‘जोगिएस है बाबु’ भन्नु हुन्छ । आफन्त, शुभचिन्तक, गुरुहरूले फोन गरी जोगिएर काम गर्नु, बिरामीलाई डाक्टर चाहिएको बेलामा छाड्ने कुरा त हुँदैन, आफ्नो सुरक्षालाई ध्यान दिनु है’ भन्नु हुन्छ । आफ्ना प्रियजनहरूको यस्तो सन्देश पाउँदा मन खुसी हुन्छ । जस्तोसुकै चुनौतिलाई पनि सामाना गर्न सक्छु जस्तो लाग्दो रहेछ । आत्मबल बढेको अनुभव भएको छ ।
चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान महाराजगञ्जबाट एमबीबीएस गरें । त्यसको केही वर्षपछि इन्टरनल मेडिसिनमा एमडी गरेको हुँ । सेती प्रादेशिक अस्पतालमा काम गर्न थालेको ६ वर्ष भयो ।
चीनको वुहानमा यो संक्रमण देखिएपछि नेपालमा यो जोखिमका बारेमा छलफल हुन थाल्यो । स्वास्थ्य मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आयोजना गरेको छलफलमा भाग लिएँ । अस्पतालमा कक्षा लिएँ । चिकित्सक साथीहरूसँग कुराकानी भइरहन्थ्यो । नेपालमा यो अवस्था आइहाल्छ, कोभिड पोजेटिभ देखिन्छन् भन्ने लागेको थिएन । कोभिड पोजेटिभको पहिलो खबर पढेपछि मन झस्किएको थियो । भयाबहको अवस्था आउने हो कि ? चाइना, अमेरिकमा जस्तै धान्नै नसक्ने हुने हो कि ? त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? यी प्रश्नले डर लागेको थियो । मन दह्रो बनाएर काम गरेँ ।
सेती प्रादेशिक अस्पतालमा कोभिड पोजेटिभका पाँचजना बिरामी भर्ना हुनु भएको थियो । चारजना निको भएर घर फर्कनु भएको छ । बाँकी एक जनाको परीक्षण भइरहेको छ । अवस्था सुधारोन्मुख छ । भर्ना भएकामध्ये पहिलो एकजना (जो अहिले डिस्चार्ज भइसक्नु भएको छ ) मा केही समस्या देखिएको थियो । कोभिडसँग सम्बन्धित समस्या चाहिं होइन । परीक्षणको रिपोर्टले पोजेटिभ देखाउँदा उहाँले पत्याउनु भएन । कहिले काहीं बिरामीमा यस्तो समस्या देखिन्छ । मेरो परीक्षण तुरुन्त गरिदिनु प¥यो भन्नुहुन्थ्यो । हामीले उहाँलाई सम्झायौं । एक सातापछि दोहो¥याउँछौं भन्यांै । त्यत्तिबेला आइसोलेसन वार्डमा उहाँ एक्लै हुनुहुन्थ्यो । छुट्याएर राखेको भन्दै अप्ठ्यारो महसुश गर्नुहुन्थ्यो । उहाँलाई बुझाउन केही समय लाग्यो । तर, बुझ्नु भो । बाहिर निस्कन नपाएको, मान्छेसँग भेटघाट गर्न नपाएकाले एन्जाइटी भएको हो त्यो । यस्तो अवस्थामा एन्जाइटीको समस्या हुन्छ । अन्य बिरामी र कोभिडका बिरामीलाई भर्ना गर्नुमा धेरै फरक छ । अन्य रोगका बिरामीलाई भर्ना गर्दा उसको समग्र अवस्था बुझेर औषधि लेखिदिए पुग्छ । नर्सिङ स्टेसनले औषधि दिन्छ । बिरामीका आफन्तले खाना ल्याउने, खुवाउने गर्छन् । लत्ताकपडा ल्याउने, सफा गर्ने काम उनीहरूले नै गर्छन् ।
कोभिड बिरामीको सन्दर्भमा आफन्तले केही गर्न मिल्ने अवस्था हँुदैन । सामान्य त्रुटिले पनि गम्भीर खतरा निम्तन सक्छ । सर्न सक्छ । त्यसकारण अस्पतालले औषधिदेखि खानेककुरा, तातोपानी चिसो पानीलगायतका सुविधाहरूको समेत व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । इन्टरनेटका लागि वाइफाइको व्यवस्था गरेका थियौं । यसले उहाँहरूले आफन्तसँग भाइबर वा मेसेन्जरमा कुरा गर्न सजिलो भएको थियो । युवा उमेरका बिरामीले त आफूलाई मन पर्ने फिल्म समेत हेर्नु भएको थियो । फिल्मल,े परिवारसँगको कुराकानीले उहाँहरूलाई एक्लो अनुभव हुन दिएको थिएन । अस्पतालले उपलब्ध गराएको सेवा सुविधाबाट उहाँहरू सन्तुष्ट र खुसी हुुनुहन्थ्यो ।
हामी फोनमा कुरा गर्छौं
एक जना बिरामी ६१ वर्षको हनुहन्थ्यो । अन्य बिरामी २० देखि ४० वर्ष उमेर समूहभित्र पर्नुहुन्थ्यो । उहाँहरूले रिपोर्ट कहिले आउँछ ? कति दिन बस्नुपर्छ ? छुट्टै कहिलेसम्म बस्नु पर्ने हो ? घर कहिले जान पाइन्छ ? यस्तै प्रश्न सोध्नु हुन्थ्यो । अहिले अस्पतालमा उपचार गराइराख्नु भएको बिरामीको पनि सोधनि यस्तै हुन्छ । हामीले उहाँहरूको पनि फोन नम्बर लिएका छौं । आफ्नो पनि दिएका छौं । जुनसुकै समय र अवस्थामा पनि हामी उहाँहरूको फोन उठाउँथ्यौं । उठाउँछौं । निको हुन्छ, आराम गर्नुस्, अप्ठ्यारो प¥यो भने हामी छौं भन्दै रोगको बारेमा बुझाएपछि उहाँहरू निश्चिन्त हुनुहुन्थ्यो । खुसी भए झैं लाग्थ्यो ।
आइसोलेसन वार्डमा भर्ना हुँदा पीपीइ लगाएर बिरामीको परीक्षण गर्छौं । त्यसपछि समस्या देखा परे मात्रै परीक्षण गर्ने हो । बिरामीको चार्ट हेर्छौ, रिपोर्ट हेर्छौं । बिहान र बेलुका हामी फोन गर्छौं । फोनमा हामीले बिरामीलाई बारम्बर सोध्ने विषय हुन्—खाना खान मन लाग्यो ? निन्द्रा लाग्यो ? नयाँ केही समस्या छ ?
यी विषयमा जानकारी लिन्छौं । समस्या भए पीपीइ लगाएर त्यहाँ पुग्ने गरेका छौं । दिउसो केही समस्या भए फोन गर्न भनेका छौं । नर्सिङ काउन्टरबाट बल्र्डप्रेसर नाप्ने, अक्सिजन नाप्ने, परामर्शको काम, आवश्यक पर्दा औषधि दिने काम दिनहुँँ हुन्छ ।
विदेशबाट आएका र संक्रमणको शंका लागेर अस्पताल आएकालाई फिबर क्लिनिका राख्छौं । त्यहाँ डाक्टर (मेडिकल अफिसर) हरूको २४ सै घण्टा ड्युटी हुन्छ । उक्त क्लिनिकमा आएकाहरूको थ्रोट स्वाब परीक्षणका लागि ल्याबमा पठाउँछौ । क्वारेन्टाइन पठाइएकाहरूको पनि थ्रोट स्वाब परीक्षणका लागि पठाउँछौं । उहाँहरूको रिपोर्ट पोजेटिभ आए आइसोलेसनमा राख्छांै । आइसोलेसन वार्डलाई दुई खालका बिरामी राख्न सक्ने गरी छुट्याएका छांै । एउटामा शंका लागेका बिरामी अर्कोमा पोजेटिभ देखिएका बिरामी । आइसोलेसन वार्डमा ३४ वेड छ । ६–७ वटा बेड शंका लागेका बिरामीको लागि हो । अन्यमा पोजेटिभ देखिएका बिरामी राखिन्छ । आइसीयू र आइसोलेसन वार्डको बीचमा नर्सिङ काउन्टर र डक्टर्स रुम छ । आइसीयू पाँच बेडको छ । २४ सै घण्टा एक जना डाक्टरको ड्उटी राखेका छांै । पालैपाले काम गर्छौ ।
अब कुरा गरौं, उपचारमा खटिने डाक्टरहरूका बारेमा । म क्वाटरमा बस्छु । अस्पतालको फेमेली क्वाटर छ । मेरो क्वाटरमा एकजना भाई पनि बस्नु हुन्छ । क्वारेन्टिनमा बसे जस्तै गरी बसेको छु । क्वाटरमा परिवारसहित बस्नु भएका डक्टरहरू अहिले होटेलमा बस्नु भएको छ ।
नोट ः शब्द घरले तयार पारेको यो सामग्री सञ्चारमाध्यम वा अन्य प्रयोजनका लागि प्रगोग गर्नु पर्ने भए अनिवार्य रूपमा स्रोत उल्लेख गर्नुपर्ने छ
# डा. शेरबहादुर कमर # सेती प्रादेशिक अस्पताल # आइसोलेसन वार्ड # इन्टरनल मेडिसिन # कोभिड पोजेटिभ # क्वारेन्टाइन # थ्रोट स्वाब ।